Depiote Malement:“MITENITENY FOANA I CAMILLE VITAL” -
AccueilRaharaham-pirenenaDepiote Malement:“MITENITENY FOANA I CAMILLE VITAL”
“Tsy olona iray akory no antsoina hoe antoko koa manamafy eto ny tenako, solombavambahoaka voafidy tamin’ny anaran’ny antoko Hiaraka Isika fa tsy misy idiran’ny antoko Hiaraka Isika mihitsy ny fanambarana nataon’i Camille Vital”, hoy ny depioten’Ampanihy Andrefana sady mpitondra tenin’ny Antenimieram-pirenena, Lihasoa Malement. Nampiasa ny anaran’ny antoko Hiaraka Isika tokoa mantsy i Camille Vital tamin’ny fanambarana nataony farany teo ka nilazany fa mambra ao amin’ny ARMADA ny antoko Hiaraka Isika.
Tsy nifampierana tamin’ny antoko Hiaraka Isika avokoa ny fanapahan-kevitra noarisin’ity jeneraly ity nanomboka tamin’ny filatsahany ho kandidà ben’ny tanàna, ny nandehanany tany amin’ny ARMADA sy ny Mitsangana ry Malagasy. Marihina moa fa nanangona faharesena hatrany ny tenany ary ny tena nisongadina tamin’izany ny zava-nitranga nandritra ny fifidianana ben’ny tanàna tany Toliara.
Nitondra ny fomba fijeriny manodidina ny raharaha Augustin Andriamananoro ihany koa ny depioten’Ampanihy Andrefana, Lihasoa Malement, araka izao manaraka izao: “raharahan’ny Fitsarana sy Augustin Andriamananoro izany ka tsy misy hidiran’ny antoko Hiaraka Isika velively. Avelao hanao ny asany ny Fitsarana!”. Nampiasa ny anaran’ny antoko Hiaraka Isika momba ity raharaha Augustin Andriamananoro ity ihany koa mantsy ny jeneraly Camille Vital. Ny zavatra adinon’ity praiminisitry ny HAT teo aloha ity fa izany Augustin Andriamananoro izany indrindra no tena nampirisika ny fanomezana IST (tsy fahafahana mivoaka ny sisintany) an’ity jeneraly ity taorian’ny fihodinana voalohany ny taona 2013.